Kedu ihe bụ ọrụ ndị ahịa nke Corte Inglés | ECommerce ozi ọma
Ọrụ ndị ahịa Corte Inglés
Azụmaahịa E-commerce ma ọ bụ azụmahịa eletrọnịkị bụ otu n'ime ihe ọhụrụ dị ukwuu na teknụzụ ozi nke na-ebugharị akụ na ụba nke ngalaba ndị bi gburugburu ụwa. O nwere otutu ihe omuma ahia di iche iche, dika nkesa, ire ere, zuo ahia, ahia na itinye onu ahia na intaneti ya na ihe nlere bu ndi ahia Corte Ingles.
Ọ bụ n'ụzọ dị otú a ka ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ ire ahịa siri malite na enwere ike ịchọta ya na mbụ na nnukwu ama na ụlọ ahịa dịka Courtlọikpe Bekee, ka enwee ike ịchọta anyị ugbu a na ihuenyo kọmputa anyị, na-enye anyị ụlọ ọrụ iji chọta ngwaahịa anyị kachasị amasị anyị naanị pịa.
Kpamkpam, dị ka akụkụ nke ngwá ọrụ azụmahịa ọhụrụ a, na-ebili El Corte Inglés, otu ndi mmadu na-ekesa ndi Spen nke mejupụtara ụlọ ọrụ dị iche iche na-enye ụdị ngwaahịa na ọrụ niile, site na ngalaba ụlọ ahịa edenyere aha na ikpo okwu a.
N'ụzọ dị otú a, abanye na peeji nke El Corte Ingles Anyị ga-enwe ike ịnweta ọtụtụ azụmaahịa na ụlọ ọrụ na-enye ụdị edemede niile. Ya mere, anyị nwere ike ịchọta, site n'ọtụtụ nhọrọ nke uwe, akpụkpọ ụkwụ na ngwa, na ihe elektrọnik na ngwongwo ọcha, ma ọ bụ na anyị nwere ike ọbụna ịzụ ahịa.
Site na nnukwu ahịa dị otu a, ọ bụ ihe dị mma na ụdị obi abụọ ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ ọ bụla na-ebilite gburugburu ọtụtụ isiokwu na ọrụ ndị enwere ike nweta na El Corte Ingles, yana enwere ike na enwere mkpesa ụfọdụ n'ihi ọnụ ọgụgụ buru ibu nke usoro ịzụta na azụmahịa nke a na-eme kwa ụbọchị n'elu ikpo okwu. N'ihi nke a, peeji a nwere usoro ọrụ ndị ahịa nke ọma nke na-enye ndụmọdụ, ozi na nkwado nye ndị ahịa niile nwere ike igosi enweghị obi abụọ, mkpesa ma ọ bụ aro na njikwa nke ikpo okwu.
1 Kedu ihe ndị ahịa ndị ahịa ụlọ ikpe Bekee nwere?
2 Aka enyemaka na ozi nke Courtlọikpe Bekee
3 Ụlọ ọrụ electronic
3.1 A haziri isiokwu ndị a n'ụzọ ga-eme ka anyị nweta enyemaka pụrụ iche maka inwe obi abụọ.
3.1.1 Ozi zuru oke
4 Otu esi akpọtụrụ ndị ahịa
4.1 Ozi mkpọtụrụ maka mkpesa na / ma ọ bụ ebubo
Kedu ihe ndị ahịa ndị ahịa ụlọ ikpe Bekee nwere?
Iji nye ụzọ na ngwaọrụ iji nweta ozi ma hazie mkpesa na nkọwa ngwa ngwa na ngwa ngwa o kwere omume, Ego El Corte Inglés EFC, SA, nwere usoro ọrụ ndị ahịa na-arụ ọrụ nke nwere ibu ọrụ ịza obi abụọ na ajụjụ niile ndị ahịa nwere n'ụdị azụmahịa dị iche iche a na-edozi n'elu ikpo okwu a.
N'otu aka ahụ, Courtlọ ikpe Bekee nwekwara ọrụ bụ isi maka ịnagide mkpesa na / ma ọ bụ nkwupụta ndị nwere ike ibilite, n'ime oge akarịghị ọnwa abụọ, mgbe emechara mkpesa nke ọma dabere na ndokwa nke Iwu maka Nchebe nke ndị ahịa nke Financiera El Corte Inglés EFC, SA
Ọ bụrụ na nsogbu nsogbu nke onye ahịa adịghị edozi, na enwere esemokwu ọ bụla na nsonaazụ enyere, na ihe karịrị ọnwa abụọ agafeela mgbe etinyere akwụkwọ mkpesa na / ma ọ bụ nkwupụta ebutere, ma ọ bụrụhaala na ejirila usoro niile - ọrụ nke ụlọ ọrụ ndị ahịa a nwere ike ịnye, onye na-ekwuchitere ya nwere ike gaa Ọrụ Nkwupụta nke Bank of Spain. Agbanyeghị, ọ ga-abụrịrị na achọrọ usoro ikpeazụ a, n'ihi n'ihi ọtụtụ ngwọta nke ndị a na-enye Ndị ahịa ahịa Corte Inglés, O yighị ka ndị na-azọrọ ihe ọ ga - achọta azịza ikpeazụ nke afọ ojuju ha.
Aka enyemaka na ozi nke Courtlọikpe Bekee
Iji nweta ozi ndị ọzọ, yana ndụmọdụ dị mma karị, El Corte Inglés na-enye ndị isi ọrụ ahịa abụọ, na ebumnuche nke inye ndị ahịa na ndị ọrụ dị iche iche aka na-enyere ndị ọzọ aka. Yabụ, dabere na nkwado na ozi achọrọ, enwere ike ịrịọ enyemaka site na usoro ọrụ abụọ dị iche iche:
Nke mbụ na-elekwasị anya naanị na nsogbu niile metụtara ọrụ e-commerce, ka ndị ọrụ nwee ike ịzụta ma ree na enweghị nsogbu ọ bụla.
I nwere mkpokọta narị atọ na iri isii na ise n’afọ.
Ọ bụ ezie na e guzobere nke abụọ iji dozie obi abụọ zuru ezu banyere usoro na arụmọrụ nke Courtlọikpe Bekee, dịka okwu metụtara ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ndinọ gị ụbọchị 365 n’afọ, n’oge awa azụmahịa.
Ụlọ ọrụ electronic
N'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke usoro ịzụta na ire ahịa nke a na-edozi na El Corte Inglés, ụlọ ọrụ azụmahịa kọmputa ya na-enye nkwado na ozi na ngalaba nke ọ bụla metụtara usoro maka ire ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ., Si ozi gbasara otu esi azụta, rue oge anyị natara zụta n'ụlọ anyị. N'otu aka ahụ, anyị nwekwara ike inye ndụmọdụ na obi abụọ ọ bụla ma ọ bụ na-ezighi ezi nke nwere ike ibilite site na mbido ruo na njedebe nke azụmahịa ahụ.
Yabụ, ozi enyere na ngalaba a kewara ụzọ a:
Esi zụta: Ebee ka a ga-enye gị ntuziaka ka ịhọrọ ihe, tinye ya na ụgbọ ibu azụmahịa gị, ma hazie usoro ịkwụ ụgwọ nke ị masịrị ịbanye. Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ gbasara usoro a, a na-enyekwa ya ohere ịzụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla n'elu ikpo okwu site na ekwentị, site na ịkpọ nọmba ahụ: 902 22 44 11.
Otu esi akwụ ụgwọ: Ntuziaka maka ịkwụ ụgwọ na kredit ma ọ bụ kaadị debit, kaadị onyinye ma ọ bụ kaadị El Corte Inglés ga-egosipụta ebe a. N'otu aka ahụ, ọ ga-ekwe omume ịlele ozi gbasara ịkwụ ụgwọ maka ọnwa na-enweghị ọmụrụ nwa na ụzọ a ga-esi mee ka nke a dabere na ego ịzụta.
Mbupu: N'ime ihe a ị nwere ike ịhụ ihe niile metụtara ọnọdụ mbupu, nke ga-adabere na mpaghara mpaghara dị iche iche, dịka:
-Peninsula Spain na Balearic Islands
-Canarias, Ceuta na Melilla
Nkwenye na mkpebi nke azịza: Nkebi nke a dị iji nyocha ozi dị mkpa iji kwado nkwa nke isiokwu nwere nsogbu.
Nloghachi: N'ebe a ị nwere ike ịhụ ozi iji mee ka nlọghachi nke ihe ndị nwere nkwarụ ma ọ bụ nke na-enweghị afọ ojuju. Ọ dị mkpa iji nyochaa ngalaba a iji mara usoro kachasị maka ịme nloghachi, nke ga-adabere n'ụdị ihe ahụ karịsịa.
Ebe ahia: Ozi banyere ọnọdụ mbupu, ụzọ ịkwụ ụgwọ ma laghachi na ndị na-ere ahịa n'èzí na-enye ngwaahịa ha site na Corte Inglés platform gosiri ebe a.
Data ndị ahịa, amụma nchekwa: Ngalaba a na-egosi anyị ozi gbasara etu esi echekwa data nkeonwe anyị, yana otu esi abanye ozi anyị iji mepee akaụntụ anyị n'elu ikpo okwu ma nweta ọdịnaya ya niile.
Tụ Isi: N'ebe a, anyị ga-enweta ozi metụtara ụtụ isi a na-etinye na ọnụahịa nke ngwaahịa, nke ga-adị iche maka ndị bi na European Union na ndị bi na mba ndị na-abụghị EU.
Kpọtụrụ anyị: Ozi kọntaktị ahụ ga-adị ebe a iji nweta ndụmọdụ na ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ mkpesa ị nwere na iji ikpo okwu.
A haziri isiokwu ndị a n'ụzọ ga-eme ka anyị nweta enyemaka pụrụ iche maka inwe obi abụọ.
N'aka nke ọzọ, maka nkọwa zuru ezu banyere isi okwu, El Corte Inglés nwere usoro enyemaka dị iche, nke na-enye nkwado na ndụmọdụ na nke ọ bụla n'ime akụkụ ndị a:
Lọ ahịa :zụ ahịa: Akwụkwọ ndekọ na Ọrụ
El Corte Inglés kaadị
Ieslọ ọrụ nke El Corte Inglés Group
Otu esi arụ ọrụ na El Corte Inglés
N'ụzọ dị otú a, enwere ike ibute obi abụọ na usoro ọrụ ahaziri iche na nke zuru ezu, n'ihe metụtara mkpa ndị ahịa.
Otu esi akpọtụrụ ndị ahịa
Iji nweta ozi gbasara ọrụ ịzụta nke ikpo okwu ahụ, ma ọ bụ inwe nkọwa gbasara ọnọdụ nke iwu enyere, ndị ọrụ nwere ike ịkpọtụrụ ekwentị ahụ: 900 373 111, nke dị ụbọchị 365 kwa afọ, ma ọ bụ ha nwekwara ike ide ozi email na adreesị na-esonụ: customers@elcorteingles.es, ebe ị nwere ike ịnweta nzaghachi ozugbo enwere ike.
N'otu aka ahụ, iji nwetakwuo ihe ọmụma gbasara ihe niile metụtara El Corte Inglés, ndị ahịa nwere ike ịkpọ nọmba ekwentị ndị ahịa: 901 122 122, site na Mọnde ruo Satọdee site na 9: 00 ruo 22: 00 pm, na Sọnde site na 10: 00. m gaa 21:00 pm, yana email: servicioclientes@elcorteingles.es ga-adịkwa maka ozi.
Ozi mkpọtụrụ maka mkpesa na / ma ọ bụ ebubo
Iji nweta nlebara anya nkeonwe na ụlọ ọrụ nke Financiera El Corte Inglés EFC, SA Ahịa Ndị Ahịa, ndị ahịa nwere ike ịga na adreesị na-esonụ:
Onye nwe ya: Mazị Enrique Estebaran Sánchez
Mgbe inweta nlebara anya site na Nkwupụta ọrụ nke Bank of Spain, nkọwa kọntaktị bụ ndị a:
C / Alcala, 48
Nkwupụta Virlọ Ọrụ Virtual Service
Iji mata usoro zuru oke gbasara usoro mkpesa ma ọ bụ nkwupụta, Financiera el Corte Inglés na-enye ndị ahịa, na nke ọ bụla n'ime ọfịs ya na ụlọ ọrụ ahụ, ederede nke Iwu maka Nchebe nke Onye Ahịa, ngwá ọrụ ga-ekwe ha bulie mkpesa nke oma ma nwekwa ezigbo nsonaazụ.
Ọrụ Ndị Ahịa nke Financiera el Corte Inglés Ezubere ya iji dozie ụdị obi abụọ ọ bụla nwere ike ibilite, ma ọ bụ banyere azụmahịa nke ikpo okwu, ịhazi ya ma ọ bụ mkpesa a ga-ewepụta gbasara arụmọrụ ya, yana ngwaahịa na ọrụ enyere ebe a. Iji nweta nsonaazụ kachasị mma site na ngwaọrụ a, ọ dị mkpa ịga na akara nlezianya ziri ezi, dịka n'ụzọ a, anyị nwere ike ịkwado ihe ngwọta nke enweghị obi abụọ ma ọ bụ nkọwa ọ bụla ị nwere gbasara iji na njikwa nke ikpo okwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Email Marketing » Ọrụ ndị ahịa Corte Inglés
Ọ bụ ihe nwute, ha anaghị akọ, jisie ike ma ọ bụrụ na ha zaa, na ọ nweghị ihe mere ebe a.
Lelee ihe, 4 na ngwaahịa na ahịrị dị ka ihe ngọpụ maka ngwaahịa a na-ebuteghị.
Manuel Garcia Paradela ebe obibi oyiyi dijo
Ndị ahịa ọrụ bụ ihe ihere 17,01 euro maka ịkpọ alo nke iwu na-ezighi ezi site n'ụlọ ikpe England, nke kwuru ezigbo ihe ihere.
Zaghachi Manuel Garcia Paradela
Biko ekwula na ndị ahịa na-arụ ọrụ nke ọma, ọnwa 3 iji banye, mgbe ọtụtụ oku gachara, ọtụtụ ozi ịntanetị na mkpesa atọ.
Mgbe m jisiri ike kpọtụrụ ma zipụ ozi niile ahụ ọzọ, m ka na-eche azịza ya.
Ọ bụ ihe ihere, anyị zụtara CI na ntanetị n'ihi ntụkwasị obi o nyere m ma ọ bụrụ na ọdịda zuru oke.
Ọrụ ahịa dị oke egwu, gịnị ka ị na-eme azịza? Ebee? Anọ m na-eche maka edemede maka ihe karịrị ọnwa abụọ nke m kpọrọ karịa oge 6 ebe m na-enye ogologo oge na azịza ya bụ otu (Ana m aga) ime mkpesa), ike gwụrụla m rịọ ka mụ na onye na-elekọta ya kwuo okwu, ọ rịọ mgbaghara ma gwa m ka m ghara ichegbu onwe m echi, akpọrọ m ya n'egbughị oge ma gwa ya banyere nke ahụ otu izu gara aga ma ọ dịghị onye kpọtụrụ m, ugbu a ma ọ bụrụ na ịzụta bụ ebubo site na ụbọchị mbụ ruo na ọ bụrụ na ọsọ ọsọ, agara m n'ụlọ ahịa nkịtị ma gwa m ma ọ bụrụ na nzụta ahụ dị n'ịntanetị enweghị m ike ikwu ebe ahụ, ka anyị lee ihe m ga-eme, m ga-azọrọ x ụlọ akụ nke Spain? EL CORTE INGLÉS
Anọ m na-echere iwu maka otu ọnwa na otu ihe ahụ na-eme m, oku na-abaghị uru amaghị ọnọdụ nke iwu ahụ ma ọ bụ n'ọnọdụ ndị ọzọ niile ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike ruo ọtụtụ awa. Ezitere m email karịa ụbọchị 15 gara aga na enweghị nzaghachi. Ka anyị gaa ihere. Naanị m tinye nkwupụta na weebụ na otu ihe ahụ ga-eme. Mgbe ahụ, ha chọrọ ịsọ mpi na ụlọ ọrụ ọkụ eletrik ọ bụla ...
Mº Angeles Fernandez Thuillier. Kaadị 600833 0112468442/026 dijo
Gini mere ichoro ka m hapuru uche m, ime otu ihe ahu imere email m ato kemgbe December 26? Mgbachi nkịtị. Otu oku ekwentị, zaa: ndị ọrụ nọ n'ọrụ, anyị ga-akpọ otu ekwentị a. Aka m na eche. Ha bụ ndị eze ịgbachi nkịtị.
Ihe m doro anya bụ na agaghị m azụta ụlọ ọrụ ọzọ na ụlọ ọrụ ahụ. Achụpụ ndị ahịa mgbe anakọtara akwụkwọ ọnụahịa. Ma ọ bụ ị na-eche akwụkwọ ikike dị na draya na efere efere ga-ekubi ume?
Ana m anabata usoro nzuzo, mana karịa nzuzo karịa ịgbachi nkịtị n'aka gị adịghị adị.
Zaghachi Mº Angeles Fernandez Thuillier. Kaadị 600833 0112468442/026
Ọrụ ekwentị na-eme ihere, enweghị ụzọ isi kwuo okwu, etinyekwara m mkpesa m nye ndị ahịa ya, mana m nyere iwu ma anata uwe elu ahụ, na-achagharị ma ọ nweghị ụzọ m ga-esi kpọtụrụ ha, ma site na ekwentị, ma ọ bụ site na email n'ihi na ọ dịghị onye na-aza. Ndi nwe ala ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkwado ọrụ ndị ahịa, kpochapụ ọrịre x web
Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa? Kedu ihe ihere bụ nke a !!!!!! N'agwaghị okwu, nsogbu gị gafere na mkpuchi bọọlụ gị, ndo, nsogbu gị. Enweela m nsogbu onwe m na nke ọrụ n'ihi enweghị ike idozi nsogbu. Amaghị m ugboro ole m kpọrọ, na-akwụ ụgwọ nke a kpatara m, ezitere m ọtụtụ ozi ịntanetị, ruo taa ha anaghị edozi ihe ọ bụla. Enwere m ọrịa nke gị "anyị ga-ezigara ozi gị na ngalaba kwesịrị ekwesị, ha ga-alaghachikwute gị," na SHIT. Iwe na-ewe m nke ukwuu na ọ bụrụ na m nwere onye kpatara ọrụ dị otú ahụ na-abaghị uru n’ihu m, amaghị m ihe ga-eme.
Onweghikwa ihe na - eme, ụbọchị, izu, ọnwa gara aga, ọ nweghị ihe na - eme. Ugbu a, gị, dị ka mmadụ efu na-efu, kwụsị ịkwụ ụgwọ ihe, ma ọ bụ emezughị ọrụ gị ma ị ga-ahụ ma ha ga-awakpo gị dị ka anụ ọhịa wolf agụụ ji.
Eleghi anya enwere m ike ịhapụ, chefuo ihe niile ma hapụ ha ka ha mee ihe ha chọrọ, mana ọ naghị esi na dick m pụta, nke ahụ dị mma, aga m aga ruo ebe ọ dị mkpa.
Na nkenke, ọrụ ndị ahịa bụ ihe mkpofu, ihe arụ, chaf, crap, scum, slop, filth, wdg.
N'ehihie, anakọtara m iwu m na-etinye, m rịọrọ ka 1,5 banana nke unere maka ego 2,84 ma nye m 956 gram maka ego 1.
Ya mere, ha aghaghachitere ihe dị iche na ego na akaụntụ m ma ọ bụ wetara unere ahụ furu efu n'ụlọ m.
Site n'ụzọ, ọrụ bụ ihe ihere, ị na-enye pịa & ụgbọ ala anyị na-aga na ụgbọ ala na-enweghị na-apụ ya, ị na-etinye bọọlụ na akpati nke ngụkọta zụọ. Gha
NA YOU MARA PRLỌ dị oke ala karịa gị n'otu ngwaahịa ahụ ruo mgbe SUPERMARKET DIA na-enye ọrụ kacha mma.
M ga-emegharị ozi a na ngalaba ọrụ ndị ahịa gị.
Zaghachi Sonia Burgos
Ana m edetara gị akwụkwọ n'ihi na amaghị m ihe ọ bụla gbasara iwu m mere na Eprel 10, naanị ihe ha mere bụ izitere m nọmba iwu na ụgwọ na Eprel 15, ha gwara m na ha ga-agwa m okwu site na email usoro a na-aga Ma amabeghị m ihe ọ bụla, ọ ga-amasị m ka ị gwa m ihe biko n'ihi na enweghị m obi ụtọ na etu ha si eme, akara iwu bụ 2010180003979
Celia Pena Amador dijo
Ana m echere azịza ngwa ngwa o kwere mee,
Zaghachi Celia Peña Amador
Enwere m olileanya azịza n'oge na-adịghị anya, dị ka ị na-ewepụ ego na akaụntụ m na 15 nke ọnwa a
N’ụzọ dị mwute, ọrụ ekwentị jọgburu onwe ya. Onweghị ihe jikọrọ ya na ọmarịcha ọrụ ihu na ihu. Anaghị m nwere ike ikwu online ụlọ ahịa na niile, mma na-eche karịa obi nkoropụ na gị
azụmahịa e-commerce na ekwentị ya agaghị ekwe omume ebe ndị ahịa na-achị ọchị.
M KWES WITHR WITH NILE
Ihere agaghị ekwe omume ịkpọtụrụ ha site na ekwentị ma ọ bụ zaa ozi ịntanetị. Azụtara m friza ma ana m arịọ maka azịza maka ụbọchị 15. Biko nye m ego m azụ ma n'ezie m ga-akagbuo El Corte Ingles kaadị na agaghị m azụta ebe a ọzọ.
He Corte Inglés ọrụ ndị ahịa anaghị adị.
Azụtala m kiiboodu na ikuku na mkpịsị oke. Enwetara m kiiboodu na-ezighi ezi, ebe ọtụtụ igodo anaghị arụ ọrụ.
Agbalịrị m iso ndị ahịa na-ekwurịta okwu, n'ụzọ niile ha si enye gị. Ihe ọ bụla…
Na njedebe m ga-azụta ọzọ na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ọzọ.
Na-emefu okpukpu abụọ maka otu ngwaahịa ahụ.
Echere m na ha nyeghachi m ego m. Ebe ọ bụ na achọghị m mgbanwe ọ bụla….
Ọ ga-abụ karịa, mgbe ịzụrụ ọzọ.
AHUSRUS ỌH SR C AHUSR::
N'ihi nsogbu nchebe na kọmputa ha, ha abanyela akaụntụ ndị ahịa nke El Corte Inglés, ozugbo m chọtara ya n'ihe dị ka elekere elekere m na-anwa ịkpọtụrụ ha iji kọọ ọnọdụ a, na ịgba egwu nke ọtụtụ nhọrọ malitere ịnweta dịka ihe si mee, ndị ọrụ enweghị ike inyere m aka na oku ekwentị na-adịghị agwụ agwụ akwụ ụgwọ niile site na akara mkpanaka, na mkpokọta karịa euro 11 na oku na anatabeghị ozi-e na ha kwesiri iziga m na nọmba ihe mere na ndebanye aha nke kagbuo nke zuo mere wayo na mgbakwunye na-anabataghị oku ọ bụla ma ọ bụ nkwukọrịta na otu m ga-esi nwetaghachi akaụntụ m yana nwekwara ike ịkọrọ ndị uwe ojii Achọrọ m ozi nkwenye nke ihe ahụ merenụ.
Ihere ha na-akwado ndị ọzọ na ụlọ ọrụ IECISA ha na enweghị ụlọ ọrụ nchekwa nke ọma iji kpuchido data anyị na ọtụtụ ihe ndekọ ego anyị.
Zaghachi MARIA MONTIEL
* B -GH EX
Supercor na Calle General Oraa na akuku Diego de Leon, a na-ebute gloves na gel n'ọnụ ụzọ. Ezigbo mgbasa ozi n'ihi na mgbe ahụ onye ọrụ nwere igwe na-elele ebuka na-enweghị gloves ịhazigharị ha. Mgbe a jụrụ ya ihe kpatara na ọ naghị eji ha eme ihe, ọ na-aza na ya nwere ahụ nfụkasị na ya enweghị ike iyiri ha
Ajụjụ: Can nweghị ike ịrụ ọrụ ọzọ karịa ị metụ ngwa ahịa aka?
Anọgidere m wee hụ onye ọrụ ebubo na-enweghị uwe na-emeghe okwu ngosi yana onye na-ekwu okwu nke ọma na onye ọrụ ahụ e kwuru n'elu wee gaa ndenye ọpụpụ iji gafee ngwaahịa ahụ.
M na-arịọ onye na-enye uwe aka n'ọnụ ụzọ ma ọ bụrụ na ọ bụ iwu na onye ọ bụla ga-ewere ya ma kwuo na ọ bụ onye ọrụ ,,,,, ihe ọzọ dị m n'obi maka ya iji nweta uwe. M na-ajụ onye na-ahụ maka ego ma ọ bụrụ na m nwere ike ịme nkwupụta ma ha kpọọ onye njikwa ahụ na-apụtaghị ọtụtụ oge na sistemụ adreesị ọha na eze. Ekwesịrị m inye.
Echere m na ọ bụ onye nlekọta ahụ otu onye ahụ gbanwere na-enweghị ịhụnanya bụ SLIM NA BRUNETTE
Ndị ọzọ EMPKEADA / ahịa. O doro anya. : ntutu dị mkpụmkpụ, mgbidi siri ike na aka aka
M tinyere ihe nkpuchi
Na mịlo aka site na mbido, ana m ekwe ndị ọrụ na ndị na-ego ego ụgwọ nkwanye ugwu
Ọ B IN DC M KWES THATR ME NA M NA Onye NA-EWU NT ER DO AH DO NA-ACH NOTGH THE IWU
Zaghachi Isabel altayo
M na-ekwu ihe niile ndị bu m ụzọ kwuru, mana ugbu a, m na-ekwu maka onye obibi akwụkwọ m zụtara na 09/05/2020 ha na-alụ ọgụ ụbọchị abụọ nke ha nyefere m ya na oge ikpeazụ ha gwara m taa na cercedilla abụghị ọrụ nke mrw ma ya mere ha hapụrụ ya n'ụlọ ahịa. Ihe na-eme m adabaghị m mma na mgbakwunye na igbu oge ụbọchị abụọ n'ụlọ m na-eche ka ọ bịarute ma taa achọpụtara m na ọ dịghị onye maara ihe ọ bụla, m na-ekwu ma eleghị anya m ziri ezi na ọ si n'ụlọ ahịa kwesịrị ịkpọ ana m akọrọ m akụkọ ahụ. ọkwa nke iwu m, maka na emebeghị ya ma lee m n'amaghị ihe ọ bụla. Ana m akpọ ekwentị 901122122 dị ka onye na-anụ ya mmiri ozuzo, ha ga-akpọ m, ma ha anaghị agwa m ọnwa ma ọ bụ nke izu. N'ebe a, m ka na-eche oku ahụ.Ọ bụrụ na ịlele kaadị m, ị ga-ahụ ihe m zụtara, a ga-amanye m ịgbanwe onye na-eweta ọrụ. Agbalịrị m na peeji ịzụ ahịa gị n'ịntanetị iji gbanwee koodu zip ma ahapụghị m ya, enyeghị m ya mkpa n'ihi na iwu ndị ọzọ abịala m na koodu na-ezighi ezi, mana n'oge a, ọ ga-abụrịrị na m chọtara onye na-anaghị enyocha ihe ọ bụla ma oburu na ha di obi oma Biko zaghachi ngwa ngwa o kwere omume n'ihi na obughi na m azutara onye nbiputa ihe site na saịtị ozo ma mgbe m nwetara nke gi, agaghi m eburu ya ma mee ka onye na-ebu ihe weghachi ya. Achọrọ m ya ka ọ rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị na m ga-aga n'ahịrị enweghị ọrụ na ọtụtụ nde ndị Spen na-enweghị ọrụ, nwa m nwoke na-arụ ọrụ n'ụlọ.
Nzaghachi maria elisa brea guerra
Kpọtụrụ gị bụ ọdachi, ruo n'ókè nke na agaghị m azụta ha na ntanetị ọzọ, nke mbụ na ọdachi
Zaghachi RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ
Ajụrụ m maka oche ụra anaghị m amasị ma ọlị n'ihi na ọ naghị akwụsi ike, nke ahụ bụ n'oge nga, Achọrọ m iweghachi ya na enweghị ụzọ, ana m akpọ ha ka ha hapụ gị na ekwentị ma ọ bụrụhaala na ịchọrọ a music and you hang up out of boredom, ihere Achọrọ m ịlaghachi LA TUMBONA, Achọrọ m ka ị gwa m ihe, ihe ị ga-akwụ anyị na-akwụ, ọ bụrụ na mmadụ gụọ okwu a, enwere m olileanya na ha ga-akpọ m, m na-atarịta ụta.
Zaghachi adela lazkano goitia
Abụwo m onye ahịa nke El Corte Inglés maka afọ 46, enwebeghị m nsogbu, mana maka ọnwa 8, ihe niile bụ nsogbu, nlebara anya na mmadụ ma ọ bụrụ na ọ bụ site na ekwentị, nlelị na-aga n'ihu, na oge echere ha ịga gị mgbe ha gafere 25 nkeji.
Ihe m doro anya bụ na ndị ọrụ na-agbachitere ụlọ ọrụ ahụ ma ndị ahịa kwụọ ụgwọ maka nke ahụ.
ọrụ ndị ahịa bụ ojoro site n'ụlọ ikpe Bekee. Ha anaghị ewere ekwentị ma ọlị, ọ dịghị onye na-aza. Ha nwere ike iji obi eziokwu chebe ya. Ana m akpọ maka minit 45 ma ọ nweghị ohere ha ga-akpọ ekwentị. Tinye na kọntaktị na Malaga, ha nyefere m na ngalaba ngwa ọrụ na… gịnị kpatara ya. nwekwara maka ihe efu, onweghi onye zara, akpọrọ m opekata mpe oge 10. Ọrụ ụlọ ikpe Bekee dị njọ na ndị ọrụ ya na-akọ ma ọ bụ kpọọ Parcheesi n'oge oge ọrụ. Anọ m na-eche ụtụtụ niile maka nnyefe friji ma ha akpọbeghị ma ọ bụ mara ihe ọ bụla. Nke ihere.
Mkpesa m bụ nke ọdịdị ọzọ ebe ọ bụ na ọ dabere n'eziokwu ahụ bụ na Courtlọikpe Bekee etinyela m na ndepụta ndị nkwụghachi ụgwọ maka nkwụghachi nke 182, ... euro na-enweghị onye zụtara ma ọ bụ kwuo nkwụghachi, abụ m onye nwe akaụntụ ahụ na nwunye m ochie nwere kaadị ọzọ site n'otu akaụntụ ahụ, na mgbe anyị kewara, ọ hapụrụ m PÚA n'agbanyeghị na kaadị na akaụntụ ahụ dị n'aha ya mana ịbụ onye njide akaụntụ nke ụlọ ikpe England, I gbasaara m…. Imebi onyonyo m na CREDIT m n'ogo nke ụlọ akụ na insurances na ugbu a ị nweghị ike iche n'echiche mmebi nke ihe a niile kpatara m, enweghị m ike ịbanye n'ụlọ akụ ọ bụla maka kaadị akwụmụgwọ, ma ọ bụ mkpuchi ha chọrọ ịme m amụma ụdị ọ bụla nke mkpuchi et. wdg.
Mgbe ndụ m niile ụgwọ m na akụkọ ihe mere eme na-aga n'ihu na-enweghị ntụpọ, ọ bụ ya mere m ji ede ebe a iji hụ ma ị nyere m aka ịkwụsị ọbara ọgbụgba ahụ, na-ekele mgbochi aka maka ụdị enyemaka ọ bụla n'aka gị, na-enweghị gaa n'ihu, ekele.
Zaghachi AHMAD ABOUKAMAR
Albert perez dijo
Att nefarious ahịa ọrụ
Ha anaghị aza ekwentị ma ghara ịlaghachi oku, agaghị ekwe omume ịmara nnyefe nke ngwaahịa ma ọ bụghị mgbe ha ga-eburu nloghachi nke ọzọ maka nnyefe n'ọnọdụ ọnọdụ nkwakọ ngwaahịa.
Eziokwu bụ na ahụmịhe na e-commerce nke El Corte Inglés agaghị eji ya ọzọ, ha dị afọ ole na ole site na Amazon nke ndị na-etu ọnụ na ha chọrọ ịbụ compendia ha
Ndị njikwa ha nwere ọtụtụ ihe ha ga-amụta, ọtụtụ ...
Banyere njikwa ya dị egwu, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ebe a na-emechi, ihe na-esote, ọwa e-commerce, mana, site n'oge ruo n'oge
Anaghịzi m azụ ihe n’ụlọ ahịa a
Zaghachi Albert Pérez
Etu esi hazie tweets efu na Twitter